Indlela yokulungisa ukwahlulahlula zip ifayile? - DataNumen
Ukulungisa ulwahlulo zip ifayile (cinga igama lefayile 'mysplit.zip'), nceda wenze oku kulandelayo:
1. umxokozelo DataNumen File Splitter kwaye uyifake kwikhompyuter yakho.
3. Cofa iqhosha u "Joyina".
4. Kwidayalog "Joyina", khetha zonke iifayile zokwahlulahlula kwaye uzongeze kuluhlu lwefayile yomthombo.
5. Qiniseka ukuba ukulandelelana kwamalungu kuluhlu kuyafana neodolo yawo yantlandlolo, oko kukuthi, mysplit.z01 yeyokuqala kwaye i-mysplit.z1 yeyesibini, njl.zip yeyokugqibela.
Sebenzisa i "Shenxisela phezulu" kunye no "Shenxisela ezantsi" iqhosha ukulungisa iodolo yazo ukuba kukho imfuneko Ukuba elinye icandelo liphosakele okanye lonakele, unokulihoya, kodwa kusafuneka ugcine iodolo yabo. Umzekelo, ukuba icandelo lesi-2 aliphoswanga, ke qiniseka ukuba iindawo ezikuluhlu zii-mysplit.z01, mysplit.z03,…, mysplit.zip.
6. Cwangcisa igama lefayile oya kuyo, njenge-mysplit_merged.zip
7. Cofa ku “Start Joyina ”ukujoyina iinxalenye kwifayile yendawo ekuya kuyo mysplit_merged.zip.
8. Emva kokuba inkqubo yokujoyina igqityiwe, unga start DataNumen Zip Repair kwaye ulungise i-mysplit_merged.zip njengesiqhelo zip ifayile. Ifayile emiselweyo iya kuba nedatha yazo zonke iinxalenye zesahlulo Zip ifayile. Ungayivula ngokuthandwa Zip Izinto eziluncedo, ezinje ngo-WinZip, PhumelelaRAR, Njl
Ujoyine, zip ifayili